Yan Aung: ဘလော့ဂ်တွင် ဇော်ဂျီဖောင့် Assign လုပ်ခြင်း….
Blogger Beta Template နဲ့ မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ စရေးချင်သူများ ကြုံတွေ့ရတဲ့ ပြဿနာကတော့ မြန်မာစာကောင်းကောင်း မပေါ်တာပါပဲ. Beta Version မသုံးသေးတဲ့ ဘလော့ဂါ အသစ်များ အနေနဲ့ကတော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ဇော်ဂျီဖောင့် Assign လုပ်တဲ့နည်းကို ဒီနေရာမှာ ဖတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ Beta Version ကို ပြောင်းသုံးကြည့်ပါ။ သူကပိုပြီးတော့ user friendly ဖြစ်လို့ပါပဲ။
ကဲ. မိမိရဲ့ ဘလော့ဂ်ထဲကို Sign in ၀င်ပြီးသွားတာနဲ့ Template Tab ကိုသွားပါ။ Edit Html ကိုရွေးပါ။ အောက်ပါ Coding လေးတွေကို ရှာပါ။ အပေါ်ခပ်ကျကျ နေရာလေးတွေမှာ ရှိပါတယ်။
default="normal normal 100% 'Trebuchet MS',Trebuchet,Verdana,Sans-Serif">
<Variable name="postTitlefont" description="Post Title Font"
type="font" default="normal bold 135% Verdana,Sans-Serif">
အဲဒီ့ Coding လေးတွေကို Delete လုပ်ပြီး အောက်ပါအတိုင်း အစားသွင်းပေး လိုက်ပါ။
default="normal normal 100% 'Zawgyi-One', Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 200% 'Zawgyi-One', Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 100% 'Zawgyi-One', Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
default="normal bold 135% 'Zawgyi-One', Georgia, Times New Roman, Tahoma, Arial, sans-serif">
ဒါဆိုရင် မိမိရဲ့ဘလော့ဂ်မှာ မြန်မာစာကောင်းမွန်စွာ ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ မရှင်းသေး တာများရှိရင် Comments ထဲမှာ ၀င်ရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ.
ကျွန်တော့်ဆီကို စာရေးမေးမြန်းကြတဲ့ ဘလော့ဂါလေးများ ဒီပို့စ်လေးကို ဖတ်မိပြီး အဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ ဘလော့ဂ်လေးတွေ ဆက်ရေးနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက် ပါတယ်….
ဘလော့ဂ် Template ပေါ်မူတည်ပြီး Coding တွေ နည်းနည်းကွဲပြားနိုင်ပါတယ်. ဘယ်လိုပဲ ကွဲပြားပါစေ. Zawgyi Font ကိုဒီလိုလေး သွင်းပေးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်.
type="font" default="normal bold 135% Verdana,Sans-Serif"
type="font" default="normal bold 135% ‘Zawgyi-One’, Verdana,Sans-Serif"
အလွယ်ဆုံးပြောရရင်တော့ Type= “font” default= “…..” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းတွေ တွေ့သလောက်ရဲ့ နောက်မှာ အထက်ပါအတိုင်း ထပ်ဖြည့်ပေးလိုက်တာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်…
အကြံပြုထောက်ပြပေးခဲ့တဲ့ ဘာညာ ကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ…
ဝေးးးးးး.... ရသွားပီ ကိုရန်အောင်ရေ... ကျေးဇူးး .. ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်းလေးတွေလဲပဲ variable name တွေ သေချာကြည့်ပီး change နော်.. လုပ်တတ်ပါဖူးဆိုမှ နှစ်ကူးအဲလို error တက်လို့ ခေါင်းတော်တော်စားသွားတာ...
ko yan, i aslo have problems with errors . i cant also assign. Please instruct me.
ကိုရန်အောင်ရေ ကျနော်လုပ်ကြည့်တာ မရဘူး။။ Code ပြောင်းပြီး Save လုပ်လိုက်ရင် Error ပဲ တက်နေတာ။ " We were unable to save your template
Invalid variable declaration in page skin: Variable is used but not defined. Input: pagetitlefont "
already change zawgyi font,but I don't know how to write myanmar word post.help me please..
ya pi Ko Yan Aung.
ကိုရန်အောင်ခင်ဗျာ..ကျွန်တော့် ဘလော့မှာ..လုပ်ကြည့်တာလဲအဆင်မပြေဘူးဗျ.. ကျွန်တော်ထင်တယ် (template) မတူလို့လားမသိဘူး (eot) လုပ်တာလဲအဆင်မပြေလို့လားမသိဘူး (font) မရှိတဲ့စက်မှာဆိုရင် လေးထောင့်တုံးတွေပဲပေါ်နေတယ်..ကူညီပါ..
Tq so much for your instruction. God Bless u.
Thanks alot Ko Yan AungI'm now ok with my font problem for the blog. I'm not an IT man but if,.. all the font makers and developers organised their font system and keyboard layout, hope, all of outr Myamar Internet User and every1 willmore comfort to use.
ကိုရန်အောင်ရှင့်။ အခုလို ညွန်ပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။ အကိုပြောတဲ့ Zawgyi-one ဖောင့်က ကျမ Template ထဲမှာ ထည့်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် ဘလော့က Mozilla Firefox မှာဆိုရင် စာလုံးတွေ ကောင်းကောင်းမပေါ်ဘူး။ Google Chrome မှာတော့ ကောင်းကောင်းပေါ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာ ကျမလည်း နားမလည်ဘူး။